Ubuntu 17.10 Artful Aardvark inosvika kumagumo ekutenderera kwayo, gadziridza izvozvi | Kubva kuLinux
Nhasi, Chikunguru 19, 2018, Ubuntu 17.10 Unyanzvi Aardvark Yasvika kumagumo ehupenyu hwayo uye haigamuchire chero software kana ekuchengetedza ekuvandudza.
Yakaburitswa inopfuura mwedzi mipfumbamwe yapfuura, muna Gumiguru 19, 2017, Ubuntu 17.10 yakanzi Artful Aardvark naCanonical CEO Mark Shuttleworth, ari yekutanga kuendesa GNOME senzvimbo yedesktop by default, panzvimbo yeUbatana.
Pamusoro pekutsiva Kubatana neGNOME, Ubuntu 17.10 yakaunza shanduko dzakawanda senge chizvarwa chitsva Wayland nekumisikidza pachinzvimbo cheX.Org, sarudzo yakadzoserwa mu Ubuntu 18.04 LTS Bionic Beaver, pamusoro pekumiswa kweiyo GNOME vhezheni yeUbuntu.
Asi setsika nemagadzirirwo asina rutsigiro rurefu, mushure memwedzi mipfumbamwe, Canonical inozivisa kupera kwehupenyu hweiyi vhezheni, izvi zvinoreva kuti hakuchazove nekuvandudzwa kwepamutemo kwerudzi rupi zvarwo.
Hapana munhu anokumisa kuti usashandise Ubuntu 17.10 Artful Aardvark pakombuta yako, asi kubva zvino zvichienda mberi, yako system ichave iri panjodzi yekurwiswa chero kupi uye zvaunofarira zvekushandisa hazvizovandudzwa, kunze kwekunge iwe ukashandisa wechitatu-bato mugadziri seFlatpak kana AppImage.
Nekuti izvi, inokurudzirwa kukwidziridza kuUbuntu 18.04 LTS Bionic Beaver, Unogona kuzviita pasina kudzima mafaera, asi zvinokurudzirwa kuti umisike kubva pakutanga, kana ukaronga kuzviita tinokurudzira kuti iwe mirira vhiki kuti utange wekutanga wekuvandudza Ubuntu 18.04.1 LTS, musi waChikunguru 26, nenzira iyi haufanire kuisa zvigadziriso mushure mekuchenesa gadza.
Sezvinotarisirwa, zvese zvakasara zveUbuntu 17.10-zvakavakirwa zvave kusvikawo kumagumo ehupenyu hwavo, ndosaka kugadzirisa kuchikurudzirwa zvakare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Ubuntu 17.10 Artful Aardvark inosvika kumagumo ekutenderera kwayo, gadziridza izvozvi
Iyo Ubuntu yekuvandudza mutemo Ini handinyanye kuifarira zvakanyanya, kazhinji kazhinji inogadziridza iyo inomanikidza iwe kudzoreredza sisitimu kubva kutanga mwedzi gumi nepfumbamwe ??? haina kundikodzera, inotoita kunge Windows (not even Windows does).
Kunyangwe iri yemahara uye yemahara, kutora dambudziko kunotora distro uye kuiisa uye kudzoreredza iwo iwo mapurogiramu kunoita kuti iwe urasikirwe nenguva, tisingatauri kuti inosiya Hardware isingachashandi munguva pfupi.
Pindura kuna leonidas83glx
Kune izvo zvaunazvo, kutanga iyo LTS, ine inoenderera yekuchengetedza yekuvandudza uye ne "Service Pack" iyo isingakumanikidza iwe kudzoreredza chero chinhu. Ipapo shanduko kubva kuLTS kuenda kuLTS inotakurika, mune yangu haina kumbobvira yakandipa chero kukundikana (kana mukufamba kweshanduro diki mwedzi mipfumbamwe, asi ichokwadi kuti mukomputa yega yega inogona kupa mhinduro dzakasiyana kwazvo).
Iyo isingachashandi Hardware nyaya haisi Canonical, Ubuntu, kana chero chinhu. Chete kubva kune vanogadzira kernel. Saka chichemo kuna Reddit kuna Mr. Torvalds. Asi diki Hardware inoramba iri kunze kwehari neLinux kernel, zvirinani nemakomputa kubva makore gumi nemashanu apfuura zvese zviri chaizvo.
Iyo nyaya yezvirongwa iri imwe nyaya, mune yangu 0 matambudziko ekuvarodha pasi kubva kune yepamutemo repository, asi ndosaka ivo vari kuvandudza Snap uye vachidzivirira izvi. Kuti chete sisitimu ndiyo inovandudzwa, uye zvoga-zviine zvekushandisa zvinoenda kune imwe nzira uye nokudaro hazvikonzere mhirizhonga-yeapp.
Ngatione kana tiine rombo rakanaka. Parizvino LibreOffice uye Eclipse yakanaka. Kune rimwe divi, imwe sarudzo kurodha pasi chirongwa, kwete kubva kuzororo, asi kubva kune yayo yepamutemo webhusaiti. Kana iwe ukakanda, semuenzaniso, Android Studio, uye iyo system vhezheni inoshanduka, chirongwa ichi chiripo.
Peppermint OS 9: kugovera kunotungamirwa kune-based-based application